Ma rumeysan kartid fanaanada dhar dhigashada ku caanbaxday ee Nicky Minaj oo ugu dambeyn loo ogolaaday in ay sacuudiga Show ku qabato. | Filimside
Home ARRIMAHA BULSHADA Ma rumeysan kartid fanaanada dhar dhigashada ku caanbaxday ee Nicky Minaj oo...
Ma rumeysan kartid fanaanada dhar dhigashada ku caanbaxday ee Nicky Minaj oo ugu dambeyn loo ogolaaday in ay sacuudiga Show ku qabato.
Sida ay qorayaan warbaahinta kala duwan fanaanada caanka ah ee Nicki Minaj kuna caan baxday heesaha Hip Hopka ayaa lagu soo waramayaa in markii ugu horeysay ay Show ku qaban doonto magaalada Jiddah oo ku taalo dhulka barakeysan ee Jazeerada carbeed.
Fanaanadaan oo inta badan markey Show qabaneyso caan ku ah iney is qaawiso ayaa loo ogolaaday in 18da bishaan July ay magaalada Jiddah show ku dhigato waxaana xaflada show sida la sheegay qaban qaabadiisa loo mari doonaa nadaamka cusub ee sacuudiga dajiyeen.
Nadaamkaas ayaa wuxuu yahay in goobta mamnuuc ka yahay khamriga iyo maan dooriyaha sidoo kalana waxaa manmnuuc ah in caruur 16 jir ka yar goobta yimaadaan.
Tan iyo markuu xilka dalkaasi sacuudiga la wareegay boqor Salman iyo wiilkiisa Muxamed bin Salman waxaa is badaleen sharciyo badan oo sacuudiga horay uga jireen sida showyada noocaan oo kale.
Previous articleKadib markii Miiraan uu Reyan geeyay qasrigooda Aziiza Aslan Bey ma u ogolaan doontaa in gurigeeda ku noolaato maxayse Jonul sameyn doontaa? Iyo taxanaha Hercai qeybtiisa somaliga ku turjuman oo meel xiiso leh maraayo.
Next articleJuve oo Lukaku ka dul qaadi rabto Inter sheekada De Light fari kama qodno iyo maxaa cusub